Tia ny Tompo amin’ny fontsika rehetra
"Dia hoy Jesôsy taminy: Tiava an'i Jehôvah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra" - Mat. 22:37.
Izay manana ny fitiavan'Andriamanitra manenika ny fony dia haneho ny fahadiovana sy ny fitiavana avy amin'i Jehôvah izay nasehon'i Kristy teto amin'izao tontolo izao. Tsy manohitra velively ny lalàn'Andriamanitra izay manana ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pony, fa mankatò an-tsitrapo kosa ny didiny rehetra. Izany no atao hoe fiainana kristianina. Izay manana ny fitiavana ambony indrindra avy amin'Andriamanitra dia haneho fitiavana amin'ny mpiara-belona aminy, izay an'Andriamanitra satria noforoniny sy novonjeny. Ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna , ary adidin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay ny mankatò ny didiny (...)
Ny lalàn'Andriamanitra, izay fahamasinana tanteraka, no hany fenitra marina ho an'ny toetra. Miseho amin'ny alalan'ny fankatoavana ny fitiavana, ary mandroaka ny tahotra ny fitiavana tanteraka. Manana ny tombokasen'Andriamanitra eo amin'ny handriny izay tia an'Andriamanitra, no sady manatanteraka ny asan'Andriamanitra. [...] Hanana hery miasa mangina matanjaka eo amin'ny fiainana sy ny toetr'ireo olona manodidina azy izy ireo. Ary ho toy ny masirasira eo anivon'ny taranak'olombelona izany hery miasa mangina izany ka hanova ny hafa amin'ny alalan'ny herin'i Jesôsy Kristy. Tsy hiala amin'izy ireo velively ny hery miasa mangina sarobidy indrindra, noho ny fifandraisany amin'ilay Loharanon-kery, fa hitombo mandrakariva kosa ny fahombiazany. — YI, 26 Jolay 1894
Tokony ho foto-kevitra mifehy ny fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra, ka izany no ho fototry ny asa sy ny teny ary ny eritreritra rehetra. Raha miezaka hihazona izany fanoloran-tena izany isan'andro isika, noho ny herin'i Kristy, dia hiray amin'Andriamanitra tsy tapaka (...) Hitoetra ao am-pontsika ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra, ary hifehy ny asa ataontsika izany. Amin'izay dia mora foana ho antsika ny hikatsaka fahadiovana sy fahamasinana, sy handositra ny toe-tsaina sy ny fanaon'izao tontolo izao, ary ny hikatsaka izay mahasoa ireo manodidina antsika. Toy izany no ataon'ireo anjely be voninahitra raha manatanteraka ny iraky ny fitiavana izay nanirahana azy izy ireo. — RH, 23 Oktobra 1888.